प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हेल्थ टिप्स’ – गर्मीमा कोल्ड ड्रिङ्क्स होइन मोही खानुस् ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजारमा पाइने इन’र्जी ड्रि’ङ्स स्वास्थ्यका हि’तकारी नभएको बताउँदै गाई भैंसीको मोही पिउन सु’झाव दिएका छन् ।
बिहिबार ललितपुरमा कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको पशुपंछी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्म’निर्भर घो’षणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मोही खान सुझाव दिएका हुन् । यो गर्मीमा के के ड्रि’ङ्स, मोही पो खानुपर्छ त ।
मोही पो खानुपर्छ । विदेशबाट बट्टामा इन’र्जी ड्रिङ्स भनेर बिग्रि’एको पानी पो आएको हुन्छ कि, केही थाहा हुँदैन । मोही दुई तीन दिनभित्र खाइ सक्नुपर्छ । फ्रिजमा राख्यो भने दुई चार दिनसम्म पनि ल’म्ब्याउन सकिन्छ ।
खाने मोही हो नि, मोहीमा जस्तो तागत के मा छ ?’ प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले डेरी उत्पादन जतिको स्वा’थ्यवर्दक अरु पेय पदार्थ हुन नसक्ने बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ब्रा’ण्डमा नेपालमा चकलेट उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् । उनले त्यस्ता चकलेटका सम्भावित ब्राण्डहरु समेत सिफारिस गरेका छन् । उनले भने– ‘उनले हामीले स्वीट्जरल्याण्ड, ह’ल्याण्डको चकलेट किन खानुपर्यो ?
हिमालय चकलेट किन नबनाउने ? माउन्ट एभ’रेष्ट चकलेट किन नबनाउने, माछापु’च्छ्रे चकलेट किन नबनाउने ? फेवा चकलेट किन बनाउन नसक्ने ? फो’क्सुन्डो चकलेट ।’ हामीले उत्पादन गरेका दूधबाट यस्ता धेरै ब्राण्ड दिएर चकलेट बनाउन सकिने उनले सु’झाए ।
उनले चौरीको दुधबाट बनेका खाद्यवस्तुलाई ब्रा’ण्डिङ गरेर अलि बढी मूल्यमै पनि बि’क्री गर्न सकिने बताए । उनले चौरीको दूधबाट बनेका खाद्यवस्तु र च्या’ङ्‍ग्राको मासुलाई जडि’बुटी खाएर उत्पादन भएको भनेर बढी मूल्यमा बेच्न सकिने उल्लेख गरे ।
उनले ती वस्तुमा औ’षधीय गुण छ, त्यसकारण यसको मूल्य बढी पर्छ भनेर बि’क्री गर्ने हो भने मह\_ङ्गो भएर पनि ग्राहक फेरि खरिद गर्न आउने बताउँदै ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै औष’धीय गु’ण भएका फलफूल उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्नुपर्ने बताउँदै उनले एकपटक जामुन खाए एक वर्षलाई कलेजो सफा हुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुला गर्न लागेको बिषयमा आफ्नो बचाउ गर्दै नेपालमा उत्पादन भएको कृषिज’न्य सा’मग्री उत्पादन भई विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने दावी गरे । -रातोपाटी
२०७७ चैत्र १२, बिहीबार १९:५७ गते 1 Minute 572 Views